Ndedzipi nzira dzekuwana mahwindo asi zvinobudirira dofollow backlinks?
Kuwana dofollow backlinks kunokosha zvikuru munguva yekutsvaga injini yekugadzirisa. Vanoshumira kusimudza simba rekutsvaga kwewebhu yako mumigumisiro yekutsvaga. Munhu wese anoziva kuti Google inopa kukosha kwekutevera backlinks, kutumisa kuburikidza nemugwagwa pamapeji ewebhu.
Kune vakawanda vatsva pamisika yemakambani avo vari kutsvaga nzira dzakajeka dzekugadzira zvibatanidza zviri mukati mawo mawebsite. Zvisinei, kure nezvose izvi mazano ekugadzira mazano anotevera mazano eGoogle. Somugumisiro, webmasters vasina ruzivo vanogona kuwana chero mhinduro pamusoro pekutengesa uye nzvimbo dzepamusoro kana kuwana zvirango kubva kune injini dzekutsvaga.
Muchikamu chino, ndinoda kugoverana newe dzimwe nzira dzinobatsira uye dzakatendwa kuti uwane dofollow backlink uye kusimudza nzvimbo dzako pane peji rekutsvaga. Tine tarisiro, maitiro aya ekuvakisa anobatanidza achakubatsira kuwana mamwe magwara kubva kunjini.
Chokutanga, ngatikurukurei kuti tingaita sei kuti tisiyanise pakati pekuita nekutevera shure.
Mungaongorora sei rudzi rwemashure endinako mune?
Zvakakosha kuziva mutsauko pakati pemhando idzi dzakashamwaridzana sezvo dzine ruzivo rwakasiyana newebsite search engine optimization.
Dofollow links ndeyokubatanidza ine "tanga" mumagadzirirwo avo uye kutumira juisi yekubatanidza kubva kune imwe webhusi kune imwe. Nenzira dzakadaro, dofollow backlinks yakasikwa kubva kumusoro kweWR mawebsite inotora zviratidzo zvinokosha kuhubatanidza mhepo, kuratidza Google simba rekushandisa uye rinokosha kuvashandi.
Kuti uone kana iwe uchiwana refollow backlinks kana kwete, unongoda kuisa pairi uye sarudza kuongorora chinhu. Somuenzaniso, HTML code ye dofollow link inoita seGoogle, uye hapana inotevera Google.
Dofollow backlinks inobatsira zvikuru muzwi rekuvaka chivako sezvavanobatsira nzvimbo yako kuti ive yakakwirira mumigumisiro yekutsvaga uye kubatsira kuvandudza hutongi hwemasimba, hukuru hwepaji uye PageRank. Uyezve, ivo vanotsvaga kutsvakurudza pamusoro pehupamhi hwepamusoro uye zvakakosha zvehupenyu hwako.
Nzira dzekushandira rusununguko rwepamusoro PR dzinotevera backlinks
Commentluv ishoko rakakurumbira rinonzi WordPress plugin inoshandiswa kuita kuti hukama hwako huite mumashoko mu Commentluv Yakagadzirirwa Blogs. Unogona kuwana mabhogi akadaro uchishandisa mitsara yakajeka muGoogle (somuenzaniso - "teknolojia yepamusoro pemabhuku," "Health commentluv blogs," "Shoko rako rinokosha pano + rinoreva ma blogs," uye zvakadaro.
Unogona kuvaka zvakakodzera kuti uite backlinks kuburikidza nemashoko e blog. Chokutanga pane zvose, unofanirwa kuwana zvakaenzana nemabhugi ako emabhizimisi kana maforamu anobvumira muenzi kutumira. Mushure meizvozvo, unoda kutaurirana nemuridzi webhuku uye kumubvunza nezvekutumira zvinyorwa zvako ne dofollow link. Tumira mueni wako mushure, uye mukati mumiriri wako, unogona kubatanidza mamwe emashoko ako matsva. Kuti uwane mabhigi emufambiro akanaka munharaunda yako, unogona kutungamirira Google tsvakurudzo kana kushandisa MyBlogGuest yekutsvaga nzvimbo Source .